China Guy Strand Vise mveliso kunye nabenzi | Waxun
I-Automatic strand deadend & Splice isetyenziswa ikakhulu ngomnxeba kunye nezinto zombane ukuphelisa umtya okanye intonga phezulu kwipali nakwiliso le-ankile. Ukurhoxiswa kweStrand, iGuy Strand kunye neStatic Wire. Isetyenziselwa ukuphelisa inkxaso ye-strand messenger, nakwiziphelo eziphezulu nasezantsi zabafana. Zonke iiGrade Automatic strand deadend zezo zintambo zintambo zisi-7 kunye neengcingo eziqinileyo ezichongwe ngamagama eemveliso, ukutyabeka, iintlobo zentsimbi, nakuluhlu lobubanzi oludwelisiweyo, kodwa hayi intambo yomtya we-3 kwaye hayi iAlumnoweld. Ukusetyenziswa okucetyiswayo kwizinki ezenziwe nge-galvanized, Aluminized, kunye neBethalume.
Isicelo: • Kwizicelo ze-deadend ezine-tophead okanye i-down guy wire. Isefu yesinyithi kunye neAluminized strand
Indawo yokuhlala kuluhlu olubanzi lweengcingo
Ungabamba ubuncinci be-90% RBMs
Ingasetyenziswa ngemitya eyahlukeneyo yentsimbi
Uyilo olulula lofakelo olulula nolukhawulezayo
Ilungele zombini iingcingo zentloko kunye nezisezantsi
Uyilo olumilise ikona lunika ukuqinisekisa ukuba babambelela ngokuqinileyo kwimicu
1. Beka ibheyile ye-ankile ejikeleze iliso le-ankile kwaye ucofe imilenze yebheyile ngokudibeneyo
idyokhwe phezu kwebheyile iphela. Jonga UMZOBO 1
2. Faka ibheyile ende yokufaka kwiindlebe zangaphandle kwidyokhwe uze uqhagamshele ikhonkco
ukuphakamisa umlobothi wakho. Jonga UMZOBO 2
3. Ncamathisela isinyuko sentsontelo kulucingo lomfo kwaye nisebenzise ukungavisisani ukuze nisuse ukutyibilika kocingo lomfana.
4. Faka into ekubambisayo ngokufaka idyokhwe. ** Sukususa iplagi enemibala ** Jonga UMZOBO 3
5. Emva kokufaka iyunithi yokubamba ngedyokhwe, jika iyunithi yokubamba, de kube yeyunithi yokubamba
"Bubble" ijonge ngaphandle, ukuyitshixela edyokhweni. Jonga UMZOBO 3b
6.Ukuqinisekisa ukufakwa okufanelekileyo kunye nokusebenza kwexesha elide ukuqinisekisa ukuba iziphelo zisikiwe zicocekile, ngaphandle
zimbi, azitywantsi, Intambo kufuneka ithe tye kwaye inlay (akukho ukugoba, iikhinki, okanye iirves)
7.Faka ucingo lomntu ukuqinisekisa ukuba yonke imicu ingena kwindebe yokulinga, emva koko ucofe ucingo lomfana ngokubamba
iyunithi ide ibuyisele endaweni yayo iplagi enemibala iphuma iyunithi yokubamba. Jonga UMZOBO 4
8.Guide ucingo ukucoca iankile iliso. Jonga UMZOBO 4b
9.Ukugqiba ukufakela ngokulungelelanisa ucingo lomfana kwimpikiswano oyifunayo.
10. Jonga ngokubonakalayo ufakelo kwaye ususe ukuphakamisa izinto. Jonga UMZOBO 5
• Uthotho lwee-GDE iziphelo ezifileyo zilinganisiwe kwi-90% RBS MAX
• Le miyalelo yofakelo yeyokujonga kuphela. Zonke izikhokelo zokhuseleko mazilandelwe. Le miyalelo
sukuxhasa iiprothokholi zoncedo.
Egqithileyo YH edityanisiweyo Camera Zinc oxide Arrester
Okulandelayo: Zenzekelayo Steel Guy Wire
oluzenzekelayo guy wire deadend